Nanefa ny trosa 800 tapitrisa Ariary teny amin’ny Cnaps - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Noefain’ny orinasa Fanalamanga ny trosa mitentina 800 tapitrisa ariary. Vokany ? Mpiasa miisa 1500 no avy hatrany dia misitraka ny zo ara-tsosialy. Nandritra ny lanonana tsotra nefa manan-danja no notanterahina teo anivon’ny orinasa Fanalamanga tany Moramanga ny 14 jona lasa teo no nanehoan’ny mpitantana ny orinasa ny fanefana izany trosa izany.
Manan-danja satria ny tontolo ara-tsosialin’ireo mpiasa raikitra miisa 900 sy ireo mpiasa an-tselika miisa 600 no ho voatsinjo manomboka izao noho ny fahavitan’ity orinasa ity nandoa ny trosa latsakemboka mitotaly 800 tapitrisa ariary tamin'ny Cnaps. Trosa niavosa efa 20 taona nanomboka ny 1996 hatramin'ny 2016. Koa satria adidy fa tsy safidy ny fidirana Cnaps ary ny adidy no miteraka zo dia nanao ezaka ny mpitantana ny orinasa Fanalamanga. Nambaran’ny tale jeneralin'ny Fanalamanga, Rakotonirina Augustin, fa ny fampihenana ny fandaniana anatiny no isan’ny nahafahana nandoa ny trosa.
Ho fanehoana ny fankasitrahana izany ezaka izany dia, tonga tany an-toerana ny tale jeneralin’ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy, Rabekoto Arizaka Raoul notronin’ireo tale maromaro eo anivon’ny Cnaps. Nanolotra mari-pankasitrahana ho an’ny mpitantana ny orinasa noho izao ezaka lehibe vitany izao ireo delegasion’ny Cnaps. Teo ny fiarenan’ny orinasa, ny ezaka famitana ny adidy, dia ny fanefana ny latsakemboky ny mpiasa izay zo ara-tsosialin’ny mpiasa. « Didin’ny lalana ny tsy fandoavana ny latsakemboka » hoy ny tale jeneralin'ny Cnaps. Manomboka izao dia orinasa ara-dalàna amin'ny Cnaps ny Fanalamanga satria nahavita ny latsakemboka ary mandray fanampiana amin'ny Cnaps rehetra. Tsy ny mpiasa amperin'asa ihany fa ireo efa nandeha nisotro ronono koa dia afaka manao fangatahana vaovao eo anivon'ny Cnaps ary hojerena ny zon'izy ireny.
Zava-dehibe izao fitsinjovan'ny Fanalamanga ny fiahiana ara-tsosialin'ny mpiasa satria indraindray ny mpampiasa dia variana fotsiny amin’ny fampitomboana ny tombombarotra ho azy, moa ny mpiasa miasa manaraka ambokony fotsiny kanefa raha misy ny fikatonan’ny orinasa dia mangidy ny vokatr’izany satria tao no efa nanankinan’ilay mpiasa ny fiainany sy ny famelomany ny ankohonany. Ho an’ny Cnaps manokana dia nambaran'ny tale jeneraly Arizaka Rabekoto Raoul fa tsy ny tanjona ara-toekarena loatra no banjinina fa ny ara-tsosialy, ka izany dia natao mba hanomezana ny zon’ireo manan-jo hisitraka izany. « Hijerena ireny sarambabem-bahoaka miasa eny anivon’ny orinasa tsy miankina ireny no tena antom-pisian’ny Cnaps », hoy hatrany izy.
Ireto ary misy santionany amin’ny vokatra mivaingana azo taorian’ny fanefana ny trosa.
Razafindrabary Célestine dia mpiasan'ny Fanalamanga. Maty am-perin'asa tao amin'ny Fanalamanga ny vadiny ary vokatr'izao fanefan'ny mpampiasa trosa izao dia mandray solo-takaitra isan-telovolana ny tenany. Randrianarivony Espérance kosa dia mpiasa amin'ny Fanalamanga ary faly fa higoka ireo tombontsoa amin'ny Cnaps dia ny fanampiana ny fianakaviana, ny fanampiana raha tra-doza amperin'asa na marary vokatry ny asa ary ny fisotron-dronono.